Somaliya hala timaato jadwal ay iyadu leedahay: MAQAAL - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Somaliya hala timaato jadwal ay iyadu leedahay: MAQAAL
Waxa dhawaan geeriyooday Mahiiga oo ahaa ninkii dalka geliyay khalkhalka siyaasadeed asagoo adeegsaday fadhiid Sheekh Shariif iyo raiisal wasaarihiisii ka darnaa ee Cabdiwelli Gaas. Waxa uu u dejiyay jadwal la raaco oo lagu gaadhayo doorashada nooca gaalada.
Waxase daaqada laga saaray dastuurkii dalku lahaa, waxana lagu bedelay dastuur dhoodhoob goboleysi ah, waxa aakhirkii kuwii dalka gubey la yiri ku raaxaysta waxa loogu yeero aqalka sare oo laga soo koobi gareeyay Maraykanka.
Waxaad is weydiin kartaa Somaliya goormey qaadatey nidaamka Maraykanka yaase ku heshiiyay? waa su’aalaha ilaa hadda la is weydiinayo?. Dalku wuxuu ku jiraa maxmiyad waxana lagala dagaalamayaa inuu cagihiisa isku taago.
Su’aasha aad is weydiin karto ayaa ah maxaa hogaamiye kasta ku fashiliyay inuu la yimaado wax Somalidu leedahay min fadhiid Xasan Sheekh ilaa Farmaajo oo hadda laga sugaayo inuu jadwalkaa gaalada raaco oo uu qabto doorashada nooca gaalada.
Ilaa hadda lama imaan nidaam Soomaali leedahay wuxuuse ku guulaystey inuu eryo horjoogihii qaramada midoobey u joogey dalka oo siyaasada dalka farogeliyay.
Hadda waxa dalka weerar ku ah Carabta ay ugu horeeyaan wahaabiyiinta Sacuudiga iyo Imaaraadka oo isticmaalaya lacag ay ku khalkhal geliyaan dalka. Ilaa hadda kuma guulaysan inay waranka la helaan habsami u socodka dawlada.
Inkastoo ciidanka qaranku dhismayo laakiin dalku ma sugi karo inuu yeesho nidaam uu isagu leeyahay inta ciidanku dhismayo maadaama nidaamka afarta sano lafteedu tahay weerar kale oo lagu rabo in siyaasada dalku sal dhigin oo wixii hogaamiye dhaba soo qabtey daaqada looga saaro kadibna eber laga soo bilaabo maadaama ayna jirin awood iyo nidaam siyaasadeysan oo degsan.
Ilaa hadda ma jiro hogaamiye si cad u sheegaya inuu daaqada ka saarayo goboleysiga, yaraynta tirada barlamaanka, iyo kala dirista sheekada aqalka sare halka madaxda hadda joogtaa ku dadaaleen in maamulada jira ay ka soo baxaan kuwo taabacsan dawladnimada.
Waxa aad loogu baahan yahay in madaxda hadda joogtaa la timaad jadwal Soomaali leedahay halkii aan ku socon lahayn mid gaaladu dejisay. Haddii madaxda hadda jirtaa ayna ku dhiiran, ayna jirina kuwo kale oo tayo leh oo hadda muuqda, waxa dalku khatar ugu jiraa in aanu saldhigan.
Jadwalka ugu fiican
Shaki kuma jiro in nidaamka gaalada ee hadda degsan ee sheegaya in doorasho la qabto 2020/21 ay fashil tahay. Haddaba waa in dalka wax lagu doorto nidaam cusub oo Soomaali leedahay oo gaalo u yeerin..
In goboleysiga daaqada laga saaro fursada ugu horeysa shacabkana dib loogu celiyo lacagta hadda ay fadhiga ku cunaan maamul jufeedyada, ayadoo la samaynayo sanduuqa horumarinta dalka oo badhasaabyo aqoonleh loogu magacaabi doono dalkoo dhan, sanduuqaasna ay ku shaqayn doonaan halka aan la taabanayn gudoomiyeyaasha degmooyinka.
In fursada ugu horeysa la sameeyo nidaam shaqo oo dalkoo dhana oo daaqada ka saaraya yaa ina hebela oo qofku aqoontiisa ku helo goob kasta oo dalka uu ka joogo.
Waxay waxaasi oo dhani iman karaan marka awood ka dambeysa la dhiso, Soomaaliduna samaysatay nidaam iyadu leedahay oo ay ugu horeyso dastuur ku salaysan diinteena halka dastuur dhoodhoobka hadda jiraa uu yahay mid gebi ahaanba ka soo horjeeda diinteena iyo dhaqankeena, ayna hogaamiye kaste waajib ku tahay inuu waqti ku lumin inuu qabyo tiro.